Zvakanakira kashew oiri yebvudzi uye ganda - AFRIKHEPRI
Kubatsirwa kweAsia yeCashew yeMvere neChangu
Kubva kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweBrazil, muti wechehew wakawanikwa nevaPutukezi muzana remakore rechigumi nemapfumbamwe. Rudzi rwevaIndia, chiTupi, rwakatumidzwa kuti "Acaju". Kuti azviparadzanise kubva pamatanda anokosha, vaFrench vakaderedza izwi rokuti "cashew". VaPutukezi vakazvizivisa mumakoloni avo muAfrica neAsia, kunyanya muMozambique uye nyika yeKerala muIndia. Iyo ichiri kukura nhasi muBrazil, West Africa neIndia nokuda kwemaapulo ayo ayo asi kunyanya pamiti yayo, iyo iyo India ndeimwe yevatongi vakura.
Cashew inonyanya kukura nokuda kwezvibereko zvayo, yakanyorwa "chibereko chakaipa" kana ", inoparara uye yehuni hard shell The cashew kernel yakabudiswa kubva mumuti.
Masikati kana makunguti anotanga kutanga. Kana inosvika pakukwirira kwaro, iyo pedoncle inokura zvikuru uye inokurumidza kuva "kapurochera", iyo inonziwo "chibereko chenhema". Muti iyo inorasikirwa nemuviri unoita kuti ude uye uome. Iyo inomiririra 10% chete yehutano hwehuse chibereko.
Iyo apulosi yakakosha yakawanda kwazvo, inotapira, inonhuwira, yakasviba uye yakazara kwazvo muVitamin C (9 nguva dzinopfuura orange).
Kubva pamakwenzi emichero, mafuta anodyiwa emidziyo yemhando yakanakisisa anotorwa. Zvose zvinogadzirwa nekodhew nut mafuta zvinogadzirwa nemaoko nekudiwa (almond extraction haigone kuitwa nemaitiro ekugadzirawo), asiwo nekusarudza. Zvechokwadi, AFRICAJOU inoremekedza zvisikwa uye kugadzirira kubatanidzwa mukusimudzirwa kwemupfumi. Nokudaro kambani inogadzira vatengi vemuSenegal neAfrica vanoita basa rekutengeserana zvakanaka.
Mashese anokohwa kana mashese achiwira pasi ndokuoma kwemazuva mashomanana.
Nzira yekubvisa yakareba uye inoda kutarisirwa. Pamberi pekombora, nutswe arongwe zvichienderana nehukuru hwavo, zvino dzakabikwa muwaini yewaini (tsika yemagariro) kana zviri nani iyo inotungirwa mumoto. Iko kukanganiswa kunoitwa nemaoko uchishandisa tsvimbo yakasimba. Kuiswa kwemafuti ekugadzira mabhota kunounza zvirimwa zviri nani. Maarumondi akawanikwa anobva aomeswa kana zuva kana muvheni rakagadzirwa. Pakupedzisira, danho rekupedzisira, the skinning iri danho risina maturo Rinoitwa nemaoko achishandisa mapanga maduku kana kupesana.
Iko kushandurwa kuva mafuta
AFRICAJOU yakatsunga kupa hupamhi hwehuori hunochengetedza mishonga yayo yese. Mafuta anopiwa naizvozvo imafuta yemhandara yekutanga kutonhora kusina zvimwe zvinowedzera.
Mhandara inokonzerwa nemafuta emuti inobva kune imwe chete yezvinotonhora. Amamondi anomanikidzirwa mumagetsi e hydraulic kana mumagetsi ekumhanya ane nguva inononoka kutendeuka.
(kuona zvifananidzo zvezvikamu zvekushandurwa (shelling, ...))
Iko kemheyo inowanikwa zvikuru:
Inokosha fatty acids - kunyanya oleic uye linoleic acid: 77%
Mineral salt: calcium, phosphorus, iron
Cashew nut mafuta inonyanya kusatiswa mafuta asidi asiwo sterols uye unsaponifiables (0,9 kusvika 1,8%). Icho chiri mhepo yemajini mafuta.
Iyo mafuta asingawanzo ane Vitamin E (21,5mg / 100g).
Unyanzvi uye tsika dzakashandiswa
Muchi wecheche ine mishonga yekurapa. Kushandiswa kwaro kwakawanda mumasikirwo e pharmacopoeia. Mishonga yeAyurvedic, somuenzaniso, inoziva kunaka kwayo. Iyi mishonga yemuIndia inozvipa miitiro yekurwisana nezvinetso zvepoyo, arthritis, rheumatism, eczema, kuderedza chirwere cheshuthala yakaipa nekurapa matambudziko ophthalmological.
Mafuta anoshandiswa tsika zvekudya uye kushandiswa kwekunze kugadzirisa maronda, psoriasis uye eczema.
Iyo yakanaka kwazvo mafuta ezvokudya.
Mukutaura kwezvokudya, iyo yakakwirira yeoileic acid (57%) inoita kuti ive yakanakisisa simba chinhu.
Cashew inewo puroteni (21%) uye rine 7 inokosha amino acids iyo muviri wedu haugoni kuumba kana kugadzira.
Iyo mhete inowanikwa mune zvinyorwa, kunyanya potassium, phosphorus uye magnesium, uye vitamini B.
Zvingwa zvine 36% protein uye 41% mahydrohydrates ndezvokudya zvakaisvonaka.
IAfricajou Oil yakagamuchira AVPA Excellence Award mu2007 & 2008.
Cashew nut mafuta inoshandiswa muzvipfeko nekuda kwehuwandu hwezvinyorwa zve unsaturated mafuta acids uye Vitamin E.
Unsaturated Fatty Acids inopa hydration uye kutengesa kune ganda rakakanganiswa.
Vitamin E, inorwisa antioxidant, inoita basa mukudzivirira kupera kweganda.
Inokosha fatty acids (kunyanya linoleic) inenge inenge inenge 25% mukugadzirwa kwemakwenzi. Aya ma-polyunsaturated acids anobatanidzwa muchivako chepamusoro pezvikamu zvepidermis. Izvozvo zvinokurudzira kuoma kweganda uye kuva ne "kupesana nokukwegura" pamigwa yakaoma uye yakakuvadzwa, kunyanya nokuvandudzwa kwechikamu chegadziriro yayo.
Mafuta eCashew anewo mavitamini E ane hutano hwekuchengetedza masero nemasukisi zvinopesana nekukuvadza kwehutachiona kuburikidza neutralizing radicals pasina. Vitamin E, iyo iyo caster mafuta ine zvakasununguka, ichaita serusununguko yekurwisa, asi rusununguko rusununguko runokonzera kukwegura kweganda sezvo inoshandura sarudzo ye phospholipid. Nokudaro, inobata basa rinoita mukudzivirira kwekwegura.
Pamusana pehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hweataturated fatty acids uye vitamini E uye chiito chekugadzirisa kwezvinhu izvi, cashew nut mafuta inoshandiswa muzvipfeko sezvinowedzera zuva rekusika, rinopesana nekwenzi dzemakanda, kutarisira ganda rakaneta uye rakaoma, asiwo kune vhudzi, mumakamuri emaoko kana miromo, semafuta ekusimbisa, uye mumazuva ekuchengetedza uye pashure pezuva.
Kubatsira kweSesame mafuta kune bvudzi uye ganda
CHIDZIDZO CHEMWE CHAKABEREKWA NEVANHU VEMAKRISTU VAKRISTU NOMWE NEMAVANESI ECORAN AKANYORWA PAMUSORO